Abalawuli base China bathi hayi kwiikhathuni 'ezingenampilo'
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » Abalawuli base China bathi hayi kwiikhathuni 'ezingenampilo'
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ulawulo lwase China lubongoze ababoneleli beenkonzo ze-intanethi ukuba baphuhlise amajelo kunye nemimandla esempilweni yokusetyenziswa kwabantwana nakwishumi elivisayo, benze ezinye iinzame kulawulo lomxholo kunye nokuphuculwa kwenkqubo, kwaye bancede ukwakha i-cyberpace efanelekileyo ekukhuleni kwabantu abancinci.
Iikhathuni zase China eziqukethe iziqendu okanye imifanekiso yobundlobongela, igazi, ubukrwada okanye iphonografi.
Ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi bakhulisa amajelo kunye nemimandla esempilweni yokusetyenziswa kwabantwana nakwishumi elivisayo.
Ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi babongozwa ukuba bancede bakhe i-cyberpace efanelekileyo ekukhuleni kwabantu abancinci.
Ulawulo lukazwelonke lwase China kunye noLawulo lweThelevishini luvakalise ukungamkelwa ngokupheleleyo kweekhathuni 'eziqukethe ubundlobongela, igazi, ubukrwada okanye iphonografi'.
Iimpawu ezixhonywe ngaphakathi kwiCostco zazisa abathengi ukuba baphelelwe ngumsebenzi ngoMatshi 2, 2020, eCypress, CA. (Ifoto nguJeff Gritchen, iRejista yeNqila yeOrange / iSCNG)
Ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi zeenkqubo ezibonakalayo zewebhu ezibonwayo ziyakhuthazwa ukuba zenze, zingenise kwaye zisasaze iikhathuni ezibonisa amaxabiso aqinisekileyo kwaye zikhuthaze ubuhle bokwenyani, obulungileyo nobuhle, igunya losasazo laseTshayina lathi kwiwebhusayithi yalo.
Ulawulo lukhuthaze ababoneleli beenkonzo ze-intanethi ukuba baphuhlise amajelo kunye nemimandla esempilweni yokusetyenziswa kwabantwana nakwishumi elivisayo, benze eminye imizamo kulawulo lomxholo kunye nokuphuculwa kwenkqubo, kunye nokunceda ukwakha i-cyberpace efanelekileyo ekukhuleni kwabantu abancinci.
The Ulawulo lweRadiyo kunye neTelevishini kaZwelonken, eyayisakuba yi-State Administration of Radio, Film, and Television and State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television, ligosa elikwinqanaba elilawulayo ngqo phantsi kweBhunga likaRhulumente weRiphabliki yaBantu iTshayina.
Umsebenzi wayo ophambili kukulawula kunye nokujonga amashishini aseburhulumenteni asebenza kumashishini kamabonwakude nakunomathotholo.
Ulawulo lweRadiyo yeSizwe kunye noLawulo lweThelevishini lilawula ngokuthe ngqo amashishini aphantsi korhulumente kwinqanaba likazwelonke njenge China Central Television, China National Radio, kunye ne China Radio International, kunye nezinye iimuvi kunye ne studio zikamabonakude kunye neminye imibutho engeyiyo eyeshishini.